Otú nyefee Music, Video, foto na kọntaktị n'etiti HTC na iPad
Otú nyefee Music, Video, Photos, Kalinda, Ozi na Ndi ana-akpo n'etiti HTC na iPad
iPad bụ ịrụ ụka adịghị a na-ekpo ọkụ mbadamba tinyere ụwa, ya pụtara imewe na kensinammuo ọrụ ahụmahụ. Ị na-ekiri fim, ekele maka photos, egwu egwuregwu na ya na uche. Ọ bụrụ na ị bụ onye HTC onye ọrụ, ma ugbu a ịzụta a ohuru iPad, dị ka iPad ikuku, eleghị anya ị chọrọ nyefee music, videos, photos na ndị ọzọ faịlụ site na HTC ka iPad maka ntụrụndụ. Otú ọ dị, ihe na-ahapụ gị bụ na Apple ọ dịghị ka ị na-eme. Inwe mwute? Ị na-adịghị na ya. E nwere ike HTC ka iPad transfer software aha ya bụ na Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-eme ya mara mma mfe n'ihi na ị nyefee kọntaktị, music, videos na foto site na HTC ka iPad, na ndị ọzọ na ụzọ gburugburu.
Nyefee HTC ka iPad effortlessly, na Anglịkan
Na otu click, na HTC ka iPad transfer software mbipụta nile music, videos, oyiyi na kọntaktị site na HTC ka iPad. Na agbara bụkwa eziokwu.
Ọ bụghị naanị na nyefee HTC ka iPad, ma ịgbanwee iPad ka HTC mfe;
Nyefee na kọntaktsị, kalinda, ozi, videos, music na foto na nanị otu click;
Tọghata ọ bụla music na video ka HTC / iPad kachasị formats nke na-ekiri;
100% data transfer na n'ihe ize ndụ-free;
Biko gaa Wondershare MobileTrans maka Mac mgbe eji a Mac.
Ịgbanwee HTC ka iPad
Nyefee iPad ka HTC
Copy HTC ka iPhone
Part 1. Olee nyefee kọntaktsị, kalinda, Ozi, Photos, Music na Video si HTC ka iPad
Part 2. Olee Ka idetuo Video, Photos, iMessages, Music, Kalinda, Ndi ana-akpo na Ọzọ si iPad ka HTC
Part 1. Olee ka ịnyefe ọdịnaya site HTC ka iPad
Ebe ọ bụ na Wondershare MobileTrans enyere nyefee kọntaktsị na ihe ndekọ, dị ka Google na Twitter, ị nwere ike banye ihe ndekọ tupu esonụ na-esote 2 nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị Software
Wụnye na-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileTrans on PC. Iji nyefee faịlụ site na HTC ka iPad, ị kwesịrị pịa na ekwentị ekwentị Nyefee.
Cheta na: iTunes ga-arụnyere na PC iji hụ na Wondershare MobileTrans arụ ọrụ kwesịrị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ HTC na iPad ka PC
Jiri USB Gịnị jikọọ gị HTC na ngwaọrụ ma iPad ka PC. The HTC ka iPad software ga-amata ngwaọrụ abụọ. Mgbe ahụ, ị ​​na-window dị ka onye gosiri na nri.
Nzọụkwụ 3. Copy Photos, Ndi ana-akpo, Video na Music si HTC ka iPad
Faịlụ niile nwere ike depụtaghachiri na-gosiri na window. Na-agagharị na faịlụ iji hụ ihe ị na-aga iṅomi. Mgbe ahụ, na-amalite faịlụ transfer site na ịpị Malite Detuo. Mgbe Wondershare MobileTrans achọpụta na music na video na-depụtaghachiri-apụghị egwuri na gị iPad, ọ ga-akpaghị aka tọghata ha ka ha iPad kachasị usoro - MP3 na MP4.
Part 2: Olee otú Detuo ọdịnaya site iPad ka HTC
Banye na ihe ndekọ mgbe ị na-eme atụmatụ ịkwaga kọntaktsị na ha gị HTC ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Tụnyere HTC ka iPad nyefe, na Wondershare MobileTrans ike ịnyefe ọzọ faịlụ. Ọ nwere ike na nyefee kọntaktị niile, photos, music, fim, Podcast, iTunes U, listi ọkpụkpọ, TV egosi na ihe niile odide na iMessages si iPad ka HTC.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ ma HTC na iPad ka PC
Nke mbụ niile, na-agba ọsọ Wondershare Mobilerans on PC. Họrọ ekwentị na ekwentị Nyefee mode. Plọg n'ime USB cables na-esi gị iPad na HTC ngwaọrụ njikọ. Mgbe scanning na ịnakwere, na iPad ka HTC transfer software ga-egosi na ngwaọrụ na ya window.
Cheta na: Iji ka Wondeshare MobileTrans ọrụ a ụzọ kwesịrị ekwesị, ị chọrọ nwụnye iTunes.
Nzọụkwụ 2. Paghaa kọntaktsị, kalinda, Photos, iMessages, Videos, Music na Ọzọ si iPad ka HTC
All akwado faịlụ na-enyocha. Iji nyefee ha niile, ị dị nnọọ pịa Malite Detuo. Ma ọ bụ, wepụ akara n'ihu gị achọghị faịlụ na pịa Malite Detuo. The Doro Anya data tupu oyiri na-eji wepụ faịlụ na njedebe gị ngwaọrụ - HTC ngwaọrụ tupu faịlụ nyefe. N'ihi ya, ị nwere ike ịlele ma ọ bụ uncheck ya dị ka mkpebi gị.
Cheta na: rụchaa ebufe faịlụ site na iPad ka HTC? Ugbu a, ị chọrọ onye HTC njikwa ngwá ọrụ iji nyere ị jikwaa faịlụ na ya. The Wondershare MobileGo for Android bụ ihe nile-na-otu HTC njikwa mfe nyefee ma njikwa everyting na gị HTC ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Akwado HTC na iPad Ịdị
Android 2.1 ka gam akporo 4.4 HTC One M8, HTC One X, HTC Ọchịchọ, HTC Wildfire S A510E, HTC Wildfire, HTC Ọchịchọ HD A9191, HTC Ọchịchọ HD, HTC ONE V, HTC Droid DNA, HTC PC36100, na ndị ọzọ >>
iOS 5/6/7/8 iPad ikuku, iPad Obere na Retina ngosi, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, iPad 2, The New iPad na iPad
Bugharịa Data si HTC ka HTC
Nyefee Data si iPhone ka HTC
Bugharịa ọdịnaya site HTC ka iPhone
Nyefee Data si iPad ka Android
Nyefee iPhone ka Android
Bugharịa Data si iPhone ka iPhone
Nyefee Samsung ka iPhone
Bugharịa ọdịnaya site iPad ka Samsung
Copy Data si gam akporo ka Samsung
> Resource> iPad> otú nyefee Music, Video, Photos, Kalinda, Ozi na Ndi ana-akpo n'etiti H